"Zvikumbiro zveGNOME", saiti kushambadza maappurojekiti eprojekiti | Linux Vakapindwa muropa
"Zvikumbiro zveGNOME", saiti nyowani yekushambadzira maappurojekiti eprojekiti
Kana GNOME yakamirira chimwe chinhu, imhaka yekureruka kwayo kwekushandisa. Ndiyo default graphical nharaunda pane mazhinji makuru ekuparadzirwa kweLinux, uye zvaisazove dai yanga isiri sarudzo yakanaka. Iyo yakagadzirirwa kukwezva ruzhinji rwevashandisi, kunyangwe isu vedu vanosarudza yepamusoro kugadzirwa vanowanzo kupedzisira vashandisa hwindo maneja kana KDE. Maitiro ekushanda haana kufanana nemapurojekiti, uye kune maapplication muchirongwa chingave chisiri mukugovera. Nechikonzero ichocho iripo kubva nhasi Zvikumbiro zveGNOME.
Semuenzaniso, Ubuntu inoshandisa GNOME muchinyorwa chayo chikuru, asi default media player yakaiswa iRhythmbox uye kwete GNOME Music kana Lollypop. Pa peji racho unounganidzwa purojekiti kunyorera uye zvimwe zvakagadzirirwa kushandiswa pane desktop, saKooha, sarudzo yakanakisa kana isu tichida kunyora iyo skrini izvozvi Wayland inoshandiswa nekukanganisa.
Zvikumbiro zveGNOME zvinounganidza maapplication kubva kuchirongwa uye bato rechitatu
Yedu Mapurogiramu eGNOME webhusaiti ikozvino yave kuwanikwa kuapp.gnome.org! Inopa akanakisa maficha kubva kuGNOME ecosystem.
Zvinangwa zveGNOME Zvikumbiro ndezvi:
Kuti vanhu vatore chikamu, kungave nekunonoka, kududzira kana kupa mari chirongwa.
Internationalization: iyo peji ndiyo yekutanga iyo yakadudzira ruzivo kubva kuGNOME ecosystem application. Iyo inhanho kuenda kumberi, asi ini ndinofunga "Core maapps" haisiyo yakanakisa dudziro ye "Core maapp".
Chengetedza ruzivo ruvandudzwe.
Ratidza ruzivo nezvemaapplication asingatarise zvakanaka paFlathub, senge GNOME Software, Mafaira kana Terminal.
Zvese zvinoverengerwa mu apps.gnome.org mwanakomana zvinoshandiswa zvinoenderana neGNOME uzivi, ndiko kuti, ivo vashoma uye vanonzwisisika, uye vane dhizaini inoenderana nechero yekushandisa interface. Semuenzaniso, izvo zvataurwa kooha, chishandiso mune zvishoma kugadzirisa uye iri rakavhurika uye rinoshandiswa. Zvimwe zvinoshandiswa zvinoonekwa ndeGNOME Web, Mabhokisi kana Gedit.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » "Zvikumbiro zveGNOME", saiti nyowani yekushambadzira maappurojekiti eprojekiti